Apartment for Sale in Botahtaung - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Apartments for Sale in Botahtaung
☃️☃️ #ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် နေရာကောင်း လမ်းကျယ် လမ်းသန့် ပတ်ဝန်းကျင်သန့်...
Botahtaung | Yangon Region
💜💜ညှိနှိုင်းဈေးဖြင့် ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် #downtown တိုက်ခန်းကျ...
800 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact Moe Htut Real Estate
Ad Number S-10171334
Moe Htut Real Estate Close
🏡ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္ ၊ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားလမ္း ၊ 7F ၊ အက်ယ္အဝန္း( 12×70 ) ၊ BR1 ၊ Sale-480LS ၊...
480 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact အာရှမြေ အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ(UCM) 09-5041674, 09-420095086, 09-420095087
Ad Number S-10172288
အာရှမြေ အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ(UCM) 09-5041674, 09-420095086, 09-420095087 Close
♦ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် 47လမ်း အသင့်နေတိုက်ခန်း ရောင်းမည်။
Phone No. To Contact Aung Hein Real Estate Services
Ad Number S-10172018
Aung Hein Real Estate Services Close
🏡ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္ ၊ 64 လမ္း ၊5F ၊ အက်ယ္အဝန္း ( 25×60 ) ၊ ၊အခန္းမ်ားလည္းဖြဲ႕ထားပါတယ္...
900 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10170740
♦ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမပေါ် ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်ခန်းရောင်းမည်။
990 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10166676
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ၄၇လမ်း တိုက်ခန်းကျယ်ရောင်းမည်
1,200 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact Myanmar Apex
Ad Number S-10157626
Myanmar Apex Close
ဗိုလ်တထောင် #49လမ်းတွင် (20x50) အလွာနိမ့် တိုက်ခန်းအရောင်း
1,100 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact သီရိသန္းေရႊအိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္
Ad Number S-10156148
ဗိုလ္​တ​ေထာင္​ဘုရားလမ္​း ၊ ဗိုလ္​တ​ေထာင္​ၿမိဳ႕နယ္​၊ 15'x60'၊...
2,800 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact ဗမာသဈစာကုမပွဏီ
Ad Number S-10152120
Ad Number S-10151607
960 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10151592